Gurman wuxuu saadaaliyay inay jiri doonaan laba dhacdo oo Apple ah ka hor dhammaadka sanadka | Waxaan ka imid mac
Dadka reer Cupertino ayaa jeclaystay dhacdooyinka dalwaddii. Iyaga oo aan lahayn cadaadis toos ah oo ka yimid Tiyaatarka Steve Jobs, waxay hore u haysteen dhawr qodob oo "la duubay" runtiina waxay tahay inay aad u fiican yihiin. Markaa wax la yaab leh ma aha in dhacdada bandhigga ee la filayo ee iPhones 13 -ka cusub aysan ahayn tii ugu dambeysay sannadkan.
Mark Gurman isagaa sidaa qaba. u maleyn in hadda bisha Sebtember aan yeelan doonno furaha caadiga ah ee iPhones, kaas oo loo adeegsan doono in lagu soo bandhigo aaladaha diyaar u ah in la iibiyo, dabadeedna, bisha Nofembar, waxaan yeelan doonnaa mid kale oo soo bandhigista MacBooks Pro. Waan arki doonaa.
Mark Gurman kaliya wuxuu ku dhajiyay baloogiisa ku saabsan Bloomberg waxa uu u malaynayo in Apple ku samayn doonto hordhacyada soo socda ee alaabteeda cusub. Ayaa sheegay inay jiri doonto dhowr qodob oo muhiim ah dalwaddu ka hor dhammaadka sannadka.
Wuxuu saadaaliyay in sannadkan aan yeelan doonno bandhigga caadiga ah ee noocyada cusub ee iPhones -ka septiembre, sidii caadada u ahayd sanado badan. Sannadkii hore si gaar ah bay dib ugu dhacday Oktoobar, laakiin dhammaanteen si fiican baan u naqaan sababta.
Sannadkan mawduuca ugu muhiimsan ee iPhones aan dib loo dhigin
Sababtoo ah masiibada Coronavirus ee farxadda leh, soo -saarka moodooyinka qaar ee xadka iPhone 12 waxay qaadatay ku dhawaad ​​bil, sidaa darteed Apple ayaa sidoo kale go'aansatay inay dib u dhigto soo bandhigisteeda illaa Oktoobar. Nasiib wanaag sannadkan dib uma dhicin dib -u -dhacaas, sidaa darteed Tim Cook ayaa la filayaa inuu na tuso kuwa cusub. IPhone 13 bisha soo socota.
Wuxuuna Gurman u malaynayaa in isla bisha Sebtember ee soo socota, Apple ay soo bandhigi doonto aaladaha cusub ee ay hore u diyaarisay iibka. Wuxuu rumeysan yahay in marka laga reebo iPhones -ka, aan arki doonno taxanaha cusub ee 7 Apple Watch, iyo jiilka saddexaad ee cusub ee AirPods. Waxay u badan tahay in qodobkan muhiimka ah aan sidoo kale ku arki doonno kan cusub iPad mini.
Goor dambe, oo ku sii jeeda Nofeembar, wuxuu saadaaliyay waxa noqon doona dhacdadii ugu dambaysay ee Apple sannadkan. Halkan ka MacBook Pro oo ah 14 iyo 16 inji oo kor u qaadi doona processor-ka cusub ee M1X oo yeelan doona shaashad mini-LED ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Gurman wuxuu saadaaliyay laba dhacdo oo Apple ah ka hor dhammaadka sanadka
WatchOS 6 Beta 8 Hadda waxaa loo heli karaa Horumariyayaal